Umiswe ku-1KZN TV obengusihlalo wayo | Isolezwe
Umiswe ku-1KZN TV obengusihlalo wayo
ezemisakazo / 21 November 2018, 2:35pm / CHARLES KHUZWAYO
UDKT Themba Fakazi omiswe isigubhukane ekubeni wusihlalo webhodi le1KZN TV Isithombe: FANELESIBONGE BENGU
UMISWE isigubhukane usihlalo webhodi labaqondisi be-1KZN TV, uDkt Themba Fakazi, usolwa ngokulahleka kwemali, ukuxhashazwa kwempahla yesiteshi nokuhlukumeza abanye abasebenzi besifazane ngocansi.
Osebambe njengosihlalo waleli bhodi uMnuz Chris Mkhize uthathe isinqumo sokumisa uFakazi ngemuva kwemibiko yabezindaba ngokuziphatha ngendlela engafanele kukaFakazi.
“Ngemuva kokujula kabanzi sithathe isinqumo sokuthi amiswe kuze kuphothulwe uphenyo ngalezi zinsolo. Okwamanje uFakazi akavunyelwe ukumela lesi siteshi kunoma yiziphi izivumelwano ezenziwayo namalungu omphakathi, abakhangisi, abaxhasi nabanye ababambe iqhaza kulesi siteshi. Ubuye wanxuswa ukuba ahlukane nokuxhumana nabasebenzi be-1KZN TV namalungu ebhodi elisha. Lokhu kubandakanya nemithombo yezindaba ngalolu daba,” kusho uMkhize.
Ethintwa uFakazi wenqabile ukuphawula kodwa wanxusa Isolezwe ukuba lixhumane nommeli wakhe uMnuz Xolani Zuma weZuma and Partners Incorporated. Uthe abaneme ngalesi sinqumo ngoba kunamanqina enyathi aboshelwe uFakazi. “Sengibhalele leli bhodi incwadi ephuthumayo ngilinxusa ukuba lisiguqule isinqumo salo ngoFakazi. Lesi sinqumo sithathwe emhlanganweni engekho uFakazi futhi namanye amalungu ebhodi engaphelele. Uma ubheka nezinsolo abekwa zona zibucayi kakhulu futhi zilimaza isithunzi sekhasimende lami.”
UZuma uthe usenqumele ugwayi katiki ibhodi ukuba liphendule incwadi yakhe kungakapheli izinsuku ezintathu elibhalele.
“Uma kwenzeka kuphela izinsuku eziyisikhombisa lesi sinqumo singaguqulwanga, lolu daba siludlulisela enkantolo ngoba siyabona ukuthi kukhona okushaya amanzi ngalesi sinqumo,” kuphetha uZuma. Ezinye izinguquko ezenziwe kwibhodi ukuthi uMnuz Muzi Ngema uzoba yiphini likasihlalo neHR Officer, uNksz Nokwazi Miya usebhekene nezomthetho futhi aphinde abe unobhala webhodi, uNksz Londiwe Xulu oyi-Finance Officer, uNksz Nellenie Naidoo noThulani “Dr 3 Seconds” Nkwanyana bazoba ngabaxhumanisi.
UMnuz Sam Zungu uzoba yi-non executive bese umphathi siteshi uMnuz Edwin Mncwango abe yilungu le-ex-officio. UMncwango uthe i-1KZN TV ihlabane ngoMkhize ngoba unamava okuphatha futhi unobudlelwano obuhle neNdlunkulu kaZulu.